Fifanarahana momba ny fiarovana ny tontolo iainana | Reef Resilience
Fampidirana ny fifanarahana momba ny fiarovana ny tontolo iainana
Nandritra ny taona maro lasa, ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana (ONG) dia nahatsapa fa ny fananganana faritra voaaro ara-dalàna dia mety tsy ampy ho fiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina sy amoron-dranomasina, indrindra any amin'ireo faritra izay efa nomena ny tompony manokana sy ny mpampiasa. Ho fanamafisana izany, ireo ONG dia mampiofana hatrany ny fifanarahana momba ny fiarovana ny tontolo iainana (MCAs) ho fiarovana ny ranomasina sy ny morontsiraka mba hanomezana fahombiazana ny fahombiazana maharitra.
Ny eco-lodge ao amin'ny Nosy Chumbe. Ny vola azo avy amin'ny hetsika ara-tontolo iainana dia averina amin'ny fiarovana, fanabeazana ary fikarohana. Sary © Chumbe Island Coral Park
Ny MCAs dia voafaritra amin'ny:
Ny fifanarahana ara-drariny na tsy ara-potoana izay mikendry ny hahatratra tanjona momba ny fiarovana ny ranomasina amoron-dranomasina izay ahafahan'ny olona iray na maromaro (mpihazona manan-jo) manaiky hanao hetsika sasany, miala amin'ny hetsika sasany, na mandidy zo sy andraikitra sasany ho takalon'ny iray na antoko hafa (antoko fitahirizam-piarahamonina miara-miasa) dia manaiky an-tsitrapo hanafahana ny tombontsoa ara-toekarena mazava (mivantana na tsy mivantana).
Ny famaritana MCA voalaza etsy ambony dia misy singa fito samihafa, izay ahitana ny:
fifanarahana mekanisma (izay fifanarahana fifanarahana ara-dalàna na tsy ara-dalàna) izay mikendry ny hahatratra izany
tanjona amin'ny fiarovana (tanjona amoron-dranomasina na taka-maso)
marina-mpihazona (antoko iray na maromaro)
fifanarahana momba ny fiarovana (manolo-tena an-tsitrapo amin'ny fanaovana hetsika sasany, manalavitra ny hetsika sasany, ary / na famindrana ny zony sy andraikitra sasany)
fikambanana miaro ny fiarovana (antoko iray na maromaro hafa) manolo-tena an-tsitrapo hanome
famporisihana ara-toekarena (famporisihana mazava, na mivantana na ankolaka).
Ny tabilao fohifohy etsy ambany dia mamaritra ny singa lehibe sy ny fari-pahaizan'ny MCA. Ny MCA dia afaka miditra amin'ny governemanta, ny vondrom-piarahamonina, ny olon-tsotra, ary ny olon-tsotra. Mifototra amin'ny fifanarahana amin'ny fepetra sy fepetra izy ireo, ary matetika dia ny fomba fiasa ambany indrindra, ary ahitana ny fiteraham-panambadiana qui-pro-quo izay ahazoan'ny tombony rehetra ny tombontsoa rehetra.
1. Fifanarahana MECHANISMS *
• Fifanarahana mividy sy mivarotra
• Ny tanana
• Firaketan-draharaha momba ny fifanarahana
• Fifanarahana fiaraha-miasa
• Fifanarahana amin'ny fitantanana iombonana
2. Zava-tsakafo **
• Manadio sy miaro ny vatohara
• Manala sy mitantana ny jono
• Miaro ny moron-dranomasina
• Mitahiry ny fahasamihafan'ny zavamaniry
• Mitahiry toerana ara-kolontsaina
• Mampiroborobo ny fizahan-tany maharitra
3. Ankavanana Holders ***
Tompony, mpitantana, na mpampiasa:
• Olona manokana sy fianakaviana
• Vondron'olona ifotonona na vondrona mpampiasa
4. CONSERVATION COMMITMENTS ****
• Manavao ny toeram-ponenana
• Hamorona drafitra fitantanana
Miala amin'ny fihetsiketsehana:
• Atsaharo ny fanjonoana
• Atsaharo ny fampiasana fitaovana manimba
• Ajanony ny fijinjana
Fanovana zo / andraikitra:
• Zon'ny fitantanana
• Zo amin'ny fizahantany
• Zon'ny mpanjono
5. A EXCHANGE
6. FANAZAVANA FANATANJAHO ***
• Vondron'olona ifotony
7. ECONOMIC INCENTIVES ****
* Mety ho fehezan-teny voafaritra na fehezanteny tsy voafaritra; dia mety maharitra (mihoatra ny 10 taona) na fotoana fohy (latsaky ny 10 taona).
** Hametraha ny vokatra tadiavin'ny tetikasa.
*** Ataovy ireo fifanarahana amin'ny fifanarahana.
**** Ataovy ireo tombony azo antoka ho an'ny roa tonta.
Ny ohatra iraisan'ny MCA dia ahitana lease, fahazoan-dàlana, fanalefahana, fifanarahana momba ny fitantanana, fifanarahana fifanarahana, fifanarahana ary fifanarahana. Ireo ONG dia nampiasa MCAs mba hanampy amin'ny fitantanana faritra voafaritra tsara, fanangonana fomba, ary fidirana amin'ny loharano. Ireo ezaka ireo dia niaro ny sehatry ny fiompiana an-dranomasina manan-danja amin'ny fametrahana fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ho toy ny mpikirakira vondron'olona sy vahaolana amin'ny governemanta sy ireo vondrom-paritra izay tompon'andraikitra amin'ny fanapahan-kevitra.
Fifandraisana eo amin'ny MCAs sy ny MPA
Ny fifanarahana momba ny fiarovana an-dranomasina sy ny faritra voaaro an-dranomasina (MPA) dia samy hafa, saingy matetika no mitarika ho amin'ny zavatra mitovy. Matetika ataon'ny Fikambanana amin'ny alalan'ny lalàna na politika ny fikambanana MPA. Mifanohitra amin'izany, ny MCA dia napetraka eo amin'ny sehatra samihafa, matetika ny tompona solosaina na mpampiasa ary ONG. Ireo MPA sy MCA ireo, na izany aza, dia azo ampiasaina mba hiarovana ireo toerana sy loharano manokana. Azo ampiasaina ihany koa ny MCAs mba hanampiana sy hampitombo ny isa sy ny fahombiazan'ny MPA raha toa ka tsy mahomby ny fametrahana MPA fanampiny. Eo amin'ny toe-javatra sasany, ny MCA dia azo ampiasaina ho mpanelanelana amin'ny fananganana orinasa MPA na famolavolana rafitra ho an'ny mpandray anjara ao an-toerana ao amin'ny fitantanana iombonana amin'ny MPA.
MCA Field Projects
Maro ireo tetikasa MCA misy manerana an'izao tontolo izao. Ny iray amin'ireo tetikasa MCA fantatra indrindra dia ny Chumbe Island Coral Park any Tanzania. Ny ohatra iray hafa dia ny fifanarahana momba ny fiarovana ny tontolo iainana any Indonezia, izay maneho ny fomba ahafahan'ny orinasa mpandraharaha mahasoa maro miasa miaraka amin'ny ONG ao an-toerana sy mpanjono eo an-toerana mba hahazoana fifanarahana izay miaro ny haran-dranomasina, ny toerana fanjonoana ary ny fiveloman'ny mpanjono, ka manome tombony ny antoko rehetra.
Alohan'ny hanombohana tetikasa MCA, ny mpitsabo dia tokony hanana fahatakarana mafy momba ny fomba ahafahan'ny singa MCA fototra mifangaro ary mifanaraka amin'ny toe-javatra iainan'ny tetikasa. Tsindrio Eto mba hianatra bebe kokoa momba ny fananganana fifanarahana momba ny fiarovana ny tontolo iainana.
Novolavolaina tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa teo amin'ny The Nature Conservancy sy ny Conservation International ny Torolàlana ho an'ny Fiarovana an-dranomasina. Natao hitondrana ireo mpitsabo amin'ny alàlan'ny dingana isan-karazany hanadihadiana, hifampiraharaha, hamolavola ary hampihatra MCA.
Ny dingana lehibe ao amin'ny MCA Field Guide dia ahitana:
Dingana 1: Fandikana feasibility
Dingana 2: Fanoloran-tena
Dingana 3: Design Design
Dingana 4: Fampiharana
Ny Field Guide dia azo ampiasaina ho antontan-taratasy mitokana, na hameno ireo dingana hafa.
Torolàlana ho an'ny mpitsabo momba ny fifanarahana momba ny fiarovana an-dranomasina (anglisy)manokatra fisie PDF
Torolàlana ho an'ny mpitsabo momba ny fifanarahana momba ny fiarovana an-dranomasina (espaniola)manokatra fisie PDF
Torolàlana ho an'ny mpitsabo momba ny fifanarahana momba ny fiarovana an-dranomasina (Bahasa Indonezia)manokatra fisie PDF
MCA Field Guide Checklistmanokatra fisie PDF
Taratasy MCA (PDF)
Taratasy fiasana MCA (Taratasy Teny)
Fanondranana ny fifanarahana momba ny fiarovana ny tontolo iainana momba ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fitantanana ny jono sy ny fampandrosoana maharitra ao Fijimanokatra fisie PDF